Njikọ Brain: Chebe ma kwalite ebe nchekwa gị! Chọpụta [HERE]!
Pill Intelligence: Chọpụta nhọrọ kachasị mma ma chọpụta nke kachasị mma!
Ose Cayenne: Chọpụta ihe nzuzo nke ose a!
Ngwaahịa	 27 2018 June
Njikọ Brain: mmemme nke na - enyere aka igbochi Alzheimer!
Alzheimer: Ọtụtụ ndị amarala aha ọrịa a. N'ime afọ ndị gafeworonụ, ọ bụ ihe dịịrị mmadụ ịhapụ ikike ọgụgụ isi na nka n'isi ya. Agbanyeghị, ọtụtụ mmadụ enweelarị ogo Alzheimer na ha amaghị. N'ọnọdụ a, oge dị oke ọnụ ahịa ma na -ala n'iyi ebe ndị na -eto eto nwere ike na -egbochi ha ibute ọrịa n'ọdịnihu. Yabụ, Njikọ Brain bụ mmemme ga -akwụsị ebe nchekwa gị na -adịghị ike ma gbochie ọnọdụ a ịka njọ.
Hụ ihe niile gbasara mmemme a n'isiokwu ndị dị n'okpuru.
Kedu otu esi edebanye aha na Njikọ Brain?
Ọ bụrụ na ị marala mmemme a ma chọọ ịdebanye aha n'oge adịghị anya, banye na webụsaịtị ahụ site na njikọ https://sl.conexaocerebro.com.br wee denye aha nkeonwe gị na nke ụlọ akụ ka ịmalite ịnata ihe niile i tozuru.
Ozi gị ga -adị nchebe yana saịtị a bụ nke a pụrụ ịtụkwasị obi n'ezie, ọ nweghị ihe egwu dị na ya. Agbanyeghị, nke a na -ekwe nkwa naanị maka ndị na -enweta weebụsaịtị webụsaịtị. Naanị ụzọ ị ga -esi zụta Mmemme Njikọ Brain gị bụ site na njikọ dị n'elu, ma ọ bụ site na ịpị bọtịnụ dị n'okpuru. Saịtị ndị ọzọ na -ekwu na ha nwere otu mmemme bụ wayo, adala maka ọnyà ịntanetị! Zụrụ naanị na webụsaịtị gọọmentị.
Iji banye na webụsaịtị gọọmentị, pịa bọtịnụ dị n'okpuru:
[junkie-alert style = "red"] Ntị! Anyị abụghị ndị na -ere ihe mmemme a. Naanị anyị na -agwa maka Brain Njikọ, iji nweta webụsaịtị gọọmentị nke ngwaahịa pịa ebe a. [/junkie-alert]
Kedu weebụsaịtị webụsaịtị
Ka ịghara itinye ihe egwu na ịkwụ ụgwọ, nnyefe ma ọ bụ na ngwaahịa ebugara, hụ na ịzụrụ ihe gị ozugbo bụ onye mepụtara ngwaahịa a. N'ihe banyere Conexão Cérebro, webụsaịtị gọọmentị bụ https://sl.conexaocerebro.com.br na site na ya ị ga -enweta uru pụrụ iche, na mgbakwunye na ikpochapụ obi abụọ gị niile gbasara mmemme ahụ.
Pịa ebe a ka a tụgharịa ya gaa na webụsaịtị nke ụdọ njikọ.
Ahịa na usoro ịkwụ ụgwọ
Otu uru dị na Conexão Cérebro bụ na ọ bụ dibịa ọkachamara mepụtara ya nke kwenyere n'ịgbasa ozi nye ọha mmadụ niile n'ụzọ enwere ike ịnweta ya. Ya mere, uru mmemme a bụ ihe atụ, pere mpe enwere ike. Uru a bụ naanị iji mee ka mmepụta na nkesa ọdịnaya ziri ezi, na -agbadaghị ndị ọkachamara raara onwe ha nye ime ya.
Ụgwọ ndebanye aha maka usoro isiokwu a bụ R $ 190,80. Agbanyeghị, ọ bụrụ na ị banye na webụsaịtị gọọmentị, ị ga -enwe nhọrọ pụrụ iche ị ga -akwụ naanị Oge 12 nke BRL 12,90 kwa ọnwa. Ọ dịtụla mgbe i chere nke ahụ erughị BRL 15 kwa ọnwa nwere ike ime ka ebe nchekwa gị ka mma ma mee ka ị pụọ n'ihe ize ndụ dementia ruo mgbe ebighị ebi? Ọ bara ezigbo uru.
Ị nwekwara ike ịkwụ ụgwọ site na mpempe akwụkwọ akụ ma ọ bụ kaadị kredit, na kaadị ị nwere ike kewaa ya ọtụtụ oge na -enweghị ọmụrụ nwa. Agaghị ekwupụta na na mpempe akwụkwọ akụ, ịzụrụ ihe na -ewe oge iji kwado, yabụ, ịnweta ihe dị n'ime ya ga -ewe obere oge karịa iji kaadị ahụ.
Ịzụta Mmemme Njikọ Brain gị ugbu a pịa bọtịnụ dị n'okpuru:
E kwuwerị: Gịnị bụ njikọ ụbụrụ?
N'ịbụ onye onye na -ahụ maka akwara ozi nke nwere ọtụtụ ahụmịhe n'ọhịa chepụtara, Conexão Cérebro bụ mmemme nwere ndụmọdụ dị irè iji gbochie Alzheimer.
Ọtụtụ ndị mmadụ mara onye mere okenye ma ọ bụ opekata mpe anụla ọrịa Alzheimer ma mara etu ọrịa a si na -atụ ụjọ. Agbanyeghị, mmadụ ole na ole maara na ọ nwere ike imetụta onye ọ bụla nọ n'afọ ndụ ndị ọzọ (ọ bụghị naanị ịka nká) ruo n'ọkwa dị ala. N'amaghị nke a, anyị na -akwụsị itinye mgbatị ahụ n'akụkụ ma mee agadi ncheta anyị.
Maka nke a, Conexão Cérebro na -enye ndị debanyere aha ya ndụmọdụ dị iche iche. Pọdkastị, akụkọ, vidiyo na usoro mgbasa ozi ndị ọzọ nwere ihe niile iji gbochie Alzheimer n'ụzọ nkịtị. N'ime mmemme a, ị ga-ahụ ihe nzuzo gbasara ọgwụ na-ebibi ụbụrụ, yana mmemme ebe nchekwa na ule iji lelee ikike iche echiche gị. Na mgbakwunye, ị ka ga -enwe ike ịnweta ikpo okwu a na -ekewaghị ekewa. N'ime ya, ị na -ajụ Dr. Annunciato ozugbo wee zaa ajụjụ gị niile.
Ọtụtụ maka ọnụ ala dị ala, ọ́ bụghị ya?
Ị nwere ike igbochi ọrịa Alzheimer?
Ee! Ọ bụrụ na i chere na ọ bụ ọrịa strok ma ọ bụ na enweghị ike izere Alzheimer, ị mejọrọ! N'ezie, ọgwụgwọ maka ndị nwere ọrịa Alzheimer dị mgbagwoju anya, n'ihi na ọrịa a na -amalite ngwa ngwa ma ọ bụrụ na ejighị ya nke ọma.
Agbanyeghị, maka ndị na -erubeghị ịka nka, igbochi dementia ga -ekwe omume. Ma ọ dịghị ihe dị mgbagwoju anya. Site na mmemme a, ị ga -ahụ na mgbatị echiche kwa ụbọchị nwere ike ịkwalite itinye uche gị, itinye uche na ịdị ike na idozi nsogbu. Na nsonaazụ ya ngwa ngwa. E kwuwerị, ọ bụrụ na -eme ya nke ọma kwa ụbọchị, ụbụrụ gị ga -eto ngwa ngwa.
Chee echiche na akụkụ ụbụrụ gị abụghị naanị uru ahụ, yabụ na ọ chọrọ mmega ahụ iji rụọ ọrụ nke ọma. Ebe ọ bụ na ọ bụ ya na -ahụ maka ihe niile dị n'ahụ ya, obere ihe ọ bụla nwere ike imetụta ya. Ọ bụ ya mere Brain Connection anaghị agha ụgha mgbe ọ na -ekwu na ọ ga -ekwe omume igbochi ọrịa Alzheimer. Ekwela oge!
Achọrọ m ịma ihe niile gbasara otu esi egbochi ALZHEIMER!
Ọnye na -bụ Dr. Nelson Annunciato?
Ọ dị mma, ị ghọtalarị ihe mmemme a bụ. Mana mgbe ahụ, onye chepụtara echiche a nke imeziwanye ikike iche echiche? Kedu onye a na -ekwukarị maka ya bụ Dr. Nelson Annunciato?
Onye kere Conexão Cérebro, ọ bụ ya mere enwere ike ịkpọ ya Programa Annunciato, Dr. Nelson maara nke ọma ihe ọ na -ekwu. Dọkịta neuroscientist a bụ onye ama ama ọ bụghị naanị na Brazil kamakwa na mahadum dị na mba ọzọ. Onye gụsịrị akwụkwọ na USP na postdoctoral na Mahadum Teknụzụ nke Munich, ọ bịala ogologo ụzọ iji ruo ebe ọ nọ.
Site na mgbe ọ dị obere, Dr. Annunciato ekwupụtabeghị ihe e ji amata onye ọhụ ụzọ na ọ bụ ya mere o ji nweta ohere agụmakwụkwọ abụọ iji mụọ ma na Brazil ma na Germany. Postgraduate na Ultrastructural Study nke Cerebellar Cortex nke Tortured Neurological Mutant Mouse, ihe ọ kacha ghọta bụ gbasara njikọ ụbụrụ.
Ya mere echegbula onwe gị, ọ bụ onye ọkachamara n'ọhịa mepụtara mmemme ahụ ma raara onwe ya nye nke ọma ịnyefe ihe ọmụma bara uru nke ọmụmụ gị nyere gị n'oge ndụ gị niile.
Usoro nkuzi Dr. Nelson dị na ịntanetị ma ị nwere ike chọọ ya n'onwe gị. Ọ dịkwa mkpa ịmara na ị gaghị azụta Conexão Cerebro na ndị ọzọ na -ere ahịa, ebe ọ bụ naanị Dr. Annunciato nwere ikike ikwu maka isiokwu ahụ.
Kedu ihe m ga -enweta site na ịdenye aha Conexão Cerebro?
Ugbu a ị ghọtara nke ọma ka Mmemme ahụ si arụ ọrụ, ghọta ihe ị ga -enweta mgbe ịmechara ndenye aha gị.
Site na mmemme Annunciato iji chekwaa ma chekwaa ebe nchekwa, ị ga -enweta ndụmọdụ maka ịgbanwe omume, mmegharị uche na ihe nzuzo gbasara nri na ọgwụ nwere ike imebi ebe nchekwa gị.
Maka imeziwanye usoro gị, ị nwere ike ịlele ọdịnaya ya n'ụdị dị iche iche, dịka ọmụmaatụ:
Pọdkastị bụ ụda nke Dr. Nelson n'onwe ya dekọrọ na ị ga -enweta ise n'ime ha n'ọnwa. N'ime ndekọ ndị a, ị ga-achọpụta ezigbo ihe na-ebute ọrịa ụbụrụ ma mụtakwa usoro ntụzịaka iji mee ka uche na ụbụrụ gị sie ike. Ihe a niile abụghị naanị ọrịa Alzheimer, dịka Dr. kọwara ọrịa ndị ọzọ dịka ọrịa strok, migraine na ịda mbà n'obi.
Ọ baghị uru ịge audios ma ọ bụrụ na ịnweghị ike ide ihe niile ekwuru, ọ bụ ya? Yabụ, na akụkọ kwa ọnwa, ị nwere nchịkọta na ụfọdụ ego nke ihe a kụziri na pọdkastị ka ị ghara ịtụfu ihe ndekọ ọ bụla. N'ụzọ dị otu a ọ ga -adị mfe itinye ihe niile n'ọrụ!
N'ime vidiyo a, ị ga -ahụ naanị usoro iji kwalite ikike ọgụgụ isi, nke gụnyere ịbawanye ebe nchekwa na itinye uche, yana ịmụta ụzọ mmụta dị mma.
Site na Njikọ Brain ị ga -ahụ ọtụtụ uru na -eme ngwa ngwa n'ime ahụ gị, gụnyere:
Ike Ikike Ncheta Ihe
Mmụba anya na itinye uche n'ihe aga -eme kwa ụbọchị
Mgbanwe na mgbochi Alzheimer
Mụbara arụpụta ihe n'ọmụmụ ihe
Na -alụso nchekasị ọgụ
Na -egbochi ọrịa ụbụrụ ndị ọzọ dị ka ịda mbà n'obi, ehighị ụra nke ọma na mgbagwoju anya uche
➦ Ịtụnanya! Achọrọ m ịdenye aha na Mmemme Njikọ Brain ugbu a!
Enwere m ike ịzụta Conexão Cerebro na Mercado Livre?
Ọ bụghị! Mercado Livre na -enye ohere ka ọtụtụ mmadụ banye na saịtị wee ree ngwaahịa ha. Ihe na -eme n'ezie bụ na ọtụtụ ndị ajọ mmadụ na -ere ihe adịgboroja, nke anaghị enyefe ma ọ bụ dị ọnụ karịa karịa na saịtị mbụ. Yabụ, a na -atụ aro ka ịzụrụ ngwaahịa ịchọrọ mgbe niile site na webụsaịtị gọọmentị.
Kpọtụrụ maka Conexão Cérebro, ọ gaghị ekwe omume ịnweta mmemme ahụ site na webụsaịtị ndị ọzọ. Nke ahụ bụ n'ihi na ọ bụ naanị site na njikọ sl.conexaocerebro.com.br ị ga -enweta ọdịnaya ozugbo n'aka onye mepụtara mmemme ahụ wee zaa ajụjụ na onye ọkachamara n'ihe gbasara akwara gbasara ya. Naanị Dr. Nelson na -eme mmemme Annunciato dị n'ịntanetị. Yabụ ekwela na saịtị ndị ọzọ na -ekwu na ha na -ere ngwugwu a. N'ezie Ọ BỤGHỌ!
Ihe mmemme a nwere mkpesa na Reclame Aqui?
Brain Njikọ bụ ngwaahịa dijitalụ, ya bụ, ị na -enweta ihe niile ozugbo na ịntanetị ọ bụghị ngwaahịa nkịtị. Yabụ, anyị na -adụ ndị na -azụ ahịa ọdụ ka ha chọọ Reclame Aqui maka aha ngwaahịa a. Yabụ, ị na -ekwe nkwa nchekwa nke data na ịzụta gị. Ịhụ nyocha n'aka ndị na -azụ ahịa ndị ọzọ dịkwa mma ịhụ ma enwere ahụmịhe ka mma ma ọ bụ nke ọjọọ. Ọ bụrụ na ngwaahịa na -ewepụta ihe o kwere ná nkwa.
Dabere na nke a, anyị, sitere na Dieta Já, nyochara Conexão Cerebro no Reclame Aqui n'onwe anyị. Ọ tụrụ anyị n'anya: Ọ nweghị ibe na mkpesa ebe a gbasara Conexão Cerebro. Nke a pụtara na ọ bụghị naanị na ngwaahịa a na -emezu nkwa o kwere, ebe ọ bụ na ndị azụrụla ya enweghị mkpesa gbasara ya.
Nke ukwuu, ọ bụghị ya ?! Ị nwere ike lelee ya n'onwe gị wee hụ na ọ bara uru ịbịanye CC gị aka!
Buli ncheta gị ma bulie ikike nke ụbụrụ gị site na ịpị ebe a!
Njikọ Brain ọ na -arụ ọrụ? Lee akaebe
Ọ bụrụ na ịchọrọ ijide n'aka na ị naghị aba n'ime oghere, mee karịa karịa! Na -ejide n'aka mgbe niile na ị gaghị atụfu ego gị ma ọ bụ nweta aghụghọ. Hụ akaebe sitere n'aka ndị ọzọ iji hụ ma ihe ị na -azụ na -arụ ọrụ nke ọma.
Ya mere, anyị họpụtara akaebe ebe a site n'aka ezigbo ndị mmadụ kwadoro usoro Conexão Cérebro. Hụ okpuru:
Ugbu a ị matara ihe niile ịchọrọ gbasara Njikọ Brain, ị nwere ike zụta ya site na ịpị bọtịnụ dị n'okpuru. Akwụsịla oge wee malite ịkwalite ikike iche echiche gị:
Nri oriri na oru: Ghota ihe o bu na odi nkpa!
Nri bara ọgaranya na vitamin D3: lelee ndị kwesịrị ịbanye na nri gị
Obube ọrụ ebube: Ntụziaka ka ị ghara ibu ibu na-eri nke ọma! Detox, Dukan, Low Carb…
Resveratrol: Ọ bụ isi iyi nke ntorobịa? Olee uru ọ bara? Ebee?